किन नेपाल छोड्ने निर्णयमा पुगे अल्मुताइरी ? (अन्तरकथा) – Nepal Press
अल्मुताइरीको बहिर्गमनसँगै गुमेको अवसर
२०७८ असोज २८ गते १७:०६
उनले खेलकुदकै प्रसंगमा फोन गरेका रहेछन् । भने, ‘नवीनजी थाहा पाउनुभयो ? नेपाली फुटबल कोचले त राजीनामा दिए नि ।’
उनको कुराले सुरूमा मलाई त्यति छोएन । फेरि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा ६-६ महिनामा प्रशिक्षक फेरिनु अनौठो कुरा थिएन । जवाफ दिँदै भने, ‘थाहा पाएँ । तर, मेरो भेटघाट भएको छैन ।’
बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, झगडाको कारण एउटा समाचारलाई लिएर रहेछ । एउटा न्यूज पोर्टलले अभ्यासका क्रममा मैदानबाहिर चुरोट पिइरहेका प्रशिक्षक अल्मुताइरीको विषयमा समाचार बनाएको रहेछ । त्यो समाचार एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङले लेखाएको आशंकाका बीच प्रशिक्षक अल-मुताइरीले आफ्नो सोसल मिडियामा पोस्ट गरेका रहेछन्, ‘म राजीनामा दिन एन्फा जाँदैछु ।’
उनले नेम्वाङलाई मेन्सन गरेर लेखेको ‘तिमी खुसी भयौ होला’ भन्ने स्टाटस नै समस्याको मूल जड बनेको रहेछ ।
वास्तवमा अल-मुताइरीलाई त्यो न्युजभन्दा पनि त्यसमा आएको ‘कमेन्ट’ ले बढी निराश पारेको थियो । त्यसमा धेरै भद्दा कमेन्ट थिए ।
उनी सानोभन्दा सानो कुरा परिवारसँग सेयर गर्छन् । नेपालमा भइरहेको गतिविधि पनि उनले परिवारसँग सेयर गरेका थिए ।
कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलमा नेपाली श्रमिकले रंगशाला निर्माणमा गरेको योगदानबाट द्रविभूत भएर कुवेती नागरिक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीलाई नेपालको प्रशिक्षक बनाउन कतार सरकारले नै पठाएको थियो । त्यसैले अल-मुताइरीको ‘राजीनामा प्रकरण’ कतार सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । कतारी राजदूत यो प्रकरणले नेपाल-कतारको सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्तामा थिए । त्यसैले पनि उनले सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्याको समाधान गर्न खोजेका हुन् । तर, नेम्वाङ नआएपछि त्यो सम्भव भएन । वार्ता असफल भएपछि पारिवारीक कारणले कतारी राजदूत एक महिनाका लागि स्वदेश फर्किए ।
रवीले ‘प्रेसर’ थेग्न नसकेपछि पुनः मलाई फोन गरे- ‘उ नगइ छोड्दिन भन्छ । के गर्ने नवीनजी ?’
फेरि नेम्वाङ र अल-मुताइरीबीच कुराकानी हुन नसकिरहेको बेला उनी पनि तनावमा थिए ।
मैले रवीलाई भनेँ, ‘उसलाई भन्नुस् न, यत्रो साफ च्याम्पियनसीप आइसकेको छ । नेपाल अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसीपको फाइनल पुगेको छैन । तिमीले फुटबल खेलाउन सक्दैनौ भनेर आलोचना गर्नेका लागि जवाफ दिने राम्रो अवसर हो । फेरि तिमीले खेलाडीलाई पनि आफ्नो लयमा ढालिसकेका छौं । यतिबेला छोड्यौं भने सबैले तिमीलाई भगौडा भन्छन् । नेपाललाई साफ च्याम्पियन बनाएर आलोचकको गालामा एक चड्कन हिर्काएर जाउ न । यसले तिम्रो कद पनि बढ्छ ।’
रवीले ठ्याक्कै यस्तै भनेछन् । अल-मुताइरीले त्यसपछि उनले रवीसँग कुनैबेला पनि टिकटको कुरा गरेनन् । कतारी राजदूत पनि दंग ।
यसैबीच नेम्वाङ र अल-मुताइरीको ठमेलमा भेटघाट पनि भयो । पुरानो कुरा बिर्सिने सम्झौता पनि भए । दुवै मिलेर ‘ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट’ दिने कुरा पनि गरियो । तर, अल-मुताइरीले ‘स्टेटमेन्ट’ निकाल्ने कुरालाई टारेर प्रशिक्षणका लागि पोखरा हिँडे ।
आखिर उनले गरे पनि त्यही । माल्दिभ्सलाई १-० ले हराएपछि खेलाडीसँग अंकमाल गरेका अब्दुल्लाहको भावुकता मैदानमा सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । उनी मैदानमा किन त्यतिधेरै उद्देलित थिए ? नेपालले श्रीलंकाविरूद्ध गोल गर्दा उनी केटाकेटी जस्तै किन उफ्रिरहेका थिए ? यी सबैमा उनको पीडा लुकेको थियो । बंगलादेशलाई १-१ गोलको बराबरीमा रोकेर नेपाल साफ च्याम्पियनसीपको फाइनल पुगेपछि उनको भावुकता मैदानमा त्यसैगरी पोखियो ।
वास्तवमा भएको के रहेछ भने, श्रीलंका र भारतबीचको खेल राष्ट्रिय टोली बसेको रिसर्टमा खेलाडीसँगै बसेर हेरिरहेको बेला ‘नवाज’ पढ्ने टाइम भएछ । र, लाइभ गरिरहेको टेलिभिजनले फुटबल छाडेर झयाप्प ‘नवाज’ पढ्न पो थालेछ । ८० मिनेटको बराबरीमा पुगेको बेला यो घटना भएपछि उनले नतिजा सोध्न फोन गरेका रहेछन्। अन्तिममा मैले खेलको नतिजा ‘गोलरहित बराबरी’ सुनाउँदा उनी फोनमा भनिरहेका थिए, ‘राम्रो डिफेन्ड गर्‍यो, श्रीलंकाले ।’
अल-मुताइरी कुवेती राजपरिवारका पनि प्रिय पात्र हुन् । केही वर्षअघि कुवेती राजाको बेलायतमा मुटुको शल्यक्रिया हुँदा उनी अस्पतालमै कुरुवा भएर बसेका थिए । उनीमार्फत नेपाली फुटबलले कुवेत सरकारबाटै विकासका थुप्रै परियोजना भित्र्याउन सक्थ्यो । तर, एउटा सामान्य विवादले चर्को रूप लिँदा उनी नेपाल छोड्ने निर्णयमा पुगे । यो नेपाली फुटबलप्रेमीका लागि ठूलो घाटा हो ।
प्रकाशित: २०७८ असोज २८ गते १७:०६
2 thoughts on “किन नेपाल छोड्ने निर्णयमा पुगे अल्मुताइरी ? (अन्तरकथा)”
नेपालका घुस्याहाहरुलाई राम्रो मान्छे मन पर्दैन । घुस्याहा राजनीतिक नेतृत्व नेपाली खेलकुदमा क्यान्सरको रुपमा हावी छ, जाे नेपाली खेलकुदकाे दुखद् पक्ष हाे।
Sahi kura. Some body is Murdabad.